Foddaa Ajajootaa keessaa baafata halqara bani - Ogeejjiiwwan Tokkee/Lamee
Ogeejjii Tokkee fi Lamee
Iddooqa tokko waliin ida'uu saagi. Dabalataan + <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa tokko waliin hir'suu saagi. Dabalataan -<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa tokko waliin ida'u/hir`isuu saagi. Dabalataan +-<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa tokko waliin hir'isuu/ida'uu saaga. Dabalataan -+<?> foddaa Ajajoota keessaatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaan waliim idaatii saagi. Foddaa ajajaa keessattiis <?>+<?> barreessu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin ogeejjii tuqaa saaga. Dabalataan <?>cdot<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin 'x' baay'isuu saagi. Dabalataan <?>si'a<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa walii urjoo baay'isuu saagi. <?>*<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin agarsiistu hir'isuu saagi. Dabalataan <?>-<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin entaa saagi. Dabalataan <?>irratti<?> foddaa Ajajoota keessaatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin agarsistu hir'isuu saagi. Dabalataan <?>div<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin haxaaroo '/' saagi. Dabalataan <?>/<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessu ni dandessa.
Iddooqa tokko waliin Buuliyaanii NOT saagi. Dabalataan neg<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin Buuliyaanii AND saaga. Dabalataan <?>and<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Idooqa lamaa waliin Buuliyaanii OR saaga. Dabalataan <?>or<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.
Iddooqa lamaa waliin agarsistuu walitti fiddu saaga. Fodda Ajaja kessattis circ barreessu ni dandeessa.
Ajaja <?>oplus<?> kana foddaa Ajaja keessatti barreessuun, galmeekee keessa ogeejjii idaatii geenga'e saagda.
<?>ominus<?> foddaa Ajajoota keessatti Ogeejjii hir'isuu geenga'e saaguuf barreessi.
<?>odot<?> foddaa Ajajoota keessatti Ogeejjii tuqaa geenga'e saaguuf barreessi.
<?>odivide<?> foddaa Ajajoota keessatti Ogeejjii qooddii geenga'e saaguuf barreessi.
Arfii lama haxaaroon giddusaani jiruu omishachuudhaaf haxaaroo bal'aa b foddaa Ajajoota keessatti (gara bita gadaana gara mirgaa olaanatti) barreessi. Wanti hundi gara bita haxaaroo jiranii olii, wannti hundi gara bita haxaaroo jirani gadii jechudhaaf arfiin kun kan qinda'amani. Ajajni kun baafata halqara foddaa Ajajoota keessa ni jira.
Arfii lama haxaaroon giddusaani jiruu omishachuudhaaf haxaaroo bal'aa b foddaa Ajajoota keessatti (gara bita olaana gara mirgaa gadaanatti) barreessi. Wanti hundi gara bita haxaaroo jiranii gadii, wannti hundi gara bita haxaaroo jirani olii jechudhaaf arfiin kun kan qinda'amani. Ajajni kun baafata halqara foddaa Ajajoota keessallee ni jira.
Arfii foormulaa kee keessa jiranitti kasaale fi paawurii ida'uuf foddaa ajaja keessatti sub yookaan sup barreessi. fakkeenyaf, a sub 2.
Odeeffannoo yeroo foddaa Ajaja keessa hujeekan galchiinu, caasaa sirrii lakkoofsa ogeejjii iddoo miseensota giddu barbaachisuu maalo yaadadha. Kun kan dhugoomu keessattu yoo iddooqa irraa gatii ogeejjii kee keessatti fayyadama jirattee dha.fakkeenyaaf, hiruu ijaaruufs 4 div 3 yookaan a div b.
Title is: Ogeejjii Tokkee/Lamee